विमोचन शृङ्खला | Kendrabindu Nepal Online News
6328177 375942 3068872 2883363
१६ कार्तिक २०७६, शनिबार १३:४६
रमेश शुभेच्छु –
आजको जमाना माने विज्ञापनको जमाना । आफ्नै देशमा के हुँदै छ ? यसो देशकै अवस्था त हेर्नुहोस् । कुन जमानामा हुनुहुन्छ तपाईँ ? एउटा मन्त्री हेलिकप्टरमा उडेर गएर गाउँको धाराको टुटी खोलेर उद्घाटन गर्छन् । एउटा सांसद् जहाज चढेर, फेरि गाडी रिजर्भ गरेर गाउँमा पुगेर ट्वाइलेटको ढोका खोलेर उद्घाटन गर्छन् । जहाज चढेर, गाडी चढेर, घोडा चढेर र त्यति गर्दा नभए कार्यकर्ताको बुइ चढेर केन्द्रका नेता गाउँ सहरका कार्यक्रमका रिबन काट्छन् । तिनले उद्घाटन गरेका समाचार मालामाल बन्छन् । तिनै समाचारले पत्रिका भरिन्छन् । रेडियो र टेलिभिजन भरिन्छन् । तपाईं भने चुपो लागेर कोठमा बसेर लेख्नुहुन्छ । अनि किताब कसैले पढिदिएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल बिक्तैन । जाबो जमानाको जाल पनि बुझ्नुहुन्न तपाईँ ।
मलाई लाग्छ, विना विमोचनका, विना हल्लाका, विना तामझामका पुस्तक कसले पढ्छ ? पढ्दैन, पढ्दै पढ्दैन । अझ ठूला नेताले विमोचन नगरेका किताब कल्ले पढ्छ ? झन् पढ्दैन, पल्टाएरै हेर्दैन । अब अलिकति त अरूको देखेर पनि बुझ्नु नि भन्छु । कुरो बुझ्नु छैन । उही मेरा गोरुको बाह्र टक्का भन्यो, बस्यो । गोरुको भाउ फेरिए जस्तै हिजोका पुस्तक आज किताब भएर कहाँबाट कहाँ पुगिसके ? तपाईँ भने मेरो किताब राम्रो छ । मेरो किताब विमोचन गर्नुपर्दैन । मेरो किताब सबैले पढिहाल्छन्, यस्तै अन्टसन्ट केके केके भन्नुहुन्छ । खाजामा ममले पिटेका बेला यस्ता बौद्धिक कुरामा पनि म, म, म मात्र भनेर हुन्छ ? अरुको अवस्था के छ बुझ्नु पर्दैन ? हल्लाले त पल्ला पो उल्टाउँछ त बाइ ?
आजको जमाना प्रचारको जमाना । यस जमानामा प्रचारविनाको काम प्रमुख बन्न सक्तैन । प्रचार गर्ने शैली कहाँबाट कहाँ पुग्यो । मान्छे पेन्टी किन्ने बेलामा त अनलाइनमा हेरेर छान्छन् । कुन साइज, प्रकार, रङ र डिजाइन राम्रो देखिन्छ आदि जाँचेर ठहराएर किन्छन् । पेन्टी त विज्ञापनका आधारमा किनेपछि, ब्रा सेन्डो कसरी किन्छन् कुरै छोडूँ । मोजा किन्न त विज्ञापन हेरेर किन्छन् भने जुत्ता चप्पलको कुरै नगरूँ । हात धुने साबुन त विज्ञापन हेरेर किन्छन्, सर्फ र फेसवासको कुरै नगरूँ । नारीेका गरगहनाको त विज्ञापनका आधारमा किनबेच हुने नै भयो । जनै र टुपीको त विज्ञापनअनुसारको खरिदी र पलाइ हुर्काइ हुन्छ । होइन, तपाईंका किताब खोजीखोजी पढिदिन कोचाहिँ फुर्सदमा छ ? आज विज्ञापनको जमाना हो लेखकज्यू, दायाँबायाँ सब विज्ञापनको जमाना । विज्ञापन नभएको सुन पनि पित्तल हुन्छ । देश गुनाको भेष हुन्छ । ठाउँ गुनाको नाउँ हुन्छ । तपाईँको आदर्श धेरै पुरानो भइसक्यो ।
तपाईं भन्नुहुन्छ, विना विमोचनका, विना हल्लाका, विना तामझामका पुस्तक खोजीखोजी पढिदिने विद्वान् छन् । हुन त होलान् तर त्यस्ता केही विद्वानले पढेर केही हुँदैन । तपाईँको विकासमा केही लछारिँदैन । साहित्यको गुणस्तर नामको चट्टानमा केही तछारिँदैन । किताब चर्चित बनाउन त भव्य विमोचन गर्नुपर्छ । विमोचनका लागि भव्य मञ्चसज्जा गर्नुपर्छ । भव्य खाजा खुवाउनुपर्छ । अलि मुखाले समालोचकलाई कमीकमजोरी चाहिँ नऔँल्याइदिनु है भनेर भाषण गर्न लाउनु पर्छ । त्यस्तो छुद्र समालोचकले पनि राम्रो भन्यो भनेपछि सब चुपचाप । त्यस्ता भाषणकर्ताका गोजीमा खाम राखिदिनुपर्छ । एउटा ठूलो फ्रेममा सम्मानपत्रशैलीको आभारपत्र चढाउनुपर्छ । केही टिभीका पत्रकारलाई खामसहित सहभागिताका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । चर्चित दैनिक र साप्ताहिकका सम्पादकलाई अझ राम्रो कुनै आकर्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि उही शैलीको मन तान्ने मायाको चिनोको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मेसो मिलेसम्म साँझमा यो लेखक जत्तिको लेखक अरू कोही छैन भनाउने गरी तागतिलो जल पिलाउनुपर्छ । कार्यक्रममा आएजति चिनिएका साहित्यकारलाई आसन ग्रहण गराउनुपर्छ । मिलेसम्म उनीहरुलाई एकएकवटा जाडो छेक्ने बर्को ओडाउनु पर्छ । सहभागी जतिलाई राम्रो झोलामा राखेर आफ्नो नयाँ किताब उपहारै गरेर ससम्मान पठाउनुपर्छ । अनि त किताब रातारात चर्चा भइहाल्छ नि । केही त देखासिकी पनि गर्नुपर्छ नि लेखकज्यू । त्यसै भनेका हुन् र बुढापाकाले ‘कुरो बुझ्नु घरतिर कुद्नु’ भनेर ।
तपाईं भन्नुहुन्छ, असली किताब पढ्ने पाठक भए नेपाली साहित्यको भलो हुने थियो । कुन् दूध, कुन् पानी छुट्टिने थियो । मेरा विचारमा यो दुधपानीको कुरा पुरानो हो । आज रजहाँसले पनि छुट्याउन छाडिसके । अब दुधपानीको कुरा नगर्नुहोस् । मेजमानीको कुरा गर्नुहोस् । मेजमानी पनि मान्छे रन्थन्याउने हुनुपर्छ । होइनलाई हो भन्ने र होलाई होइन भन्न सक्ने हुनुपर्छ । हेर्नुहोस् प्रत्येक वस्तुको विज्ञापन हुनै पर्छ । प्रचार प्रसार हुनैपर्छ । विज्ञापनले वस्तुको गुण बढाउँछ । पित्तललाई सुन पार्छ । फलामलाई चाँदी बनाउँछ । ढुङ्गालाई पत्थर, पन्ना बनाउँछ । सापलाई नाग बनाउँछ । कार्यकर्तालाई नेता बनाउँछ । विज्ञापनको यो तागन विद्वान् र बौद्धिक कर्ममा पनि लागू हुन्छ । जमानाअनुसार चल्न सक्नुपर्छ लेखकज्यू । नभए त तपाईं पनि डेटअफ हामी पनि डेटअफ ।
किताबको विज्ञापन भनेको विमोचन । विमोचन पनि एक ठाउँमा गरेर हुँदैन आज । पहिलो कुरा त राजधानीमा आँखा चिम्लेर खर्च गरेर गर्नुपर्छ । भरिसक्के केन्द्रीय राजनीतिका चर्चित नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर भाषण गर्न लगाउनुपर्छ । केही साहित्यका ठेकेदारलाई पनि भाषण गर्न लाउनुपर्छ । त्यसको एक हप्तापछि प्रदेशको राजधानीमा गएर अर्को झन् भव्य विमोचन गर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि त्यसै गर्नुपर्छ जसो केन्द्रमा गरिएको थियो । भरिसक्के मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री या सभासद्लाई थर्काउने माइकमा भाषण गराउनुपर्छ । त्यसपछि आफ्ना गृहजिल्लामा गएर त्यही किताबको गृहविमोचन गर्नुुपर्छ । त्यहाँ जिल्ला तहका नेता, उद्योगपति, व्यापारी लेखक सबैलाई भाषण गराउनुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो पालिकामा गएर र वार्डमा गएर अर्को अर्को र अझ अर्को विमोचनको संस्करण चलाउनुपर्छ । अनि पो सबैले किताब आएको कुरा थाहा पाउँछन् र किन्छन् । किताब छापेर आफैँ गतिलो छु भनेर बसेर हुन्छ लेखकज्यू ? आज जति पनि चर्चामा आएका लेखक छन् नि त्यति नै पटक विमोचन गरेर चर्चित भएका हुन् । त्यति नै पटक मेजमान खुवाएर वरिष्ठ कहलिएका हुन् । यति कुरा नबुझी कसरी साहित्य लेखिन्छ ? म त यहाँको ताल देखेर पनि बेताल हुन्छु भन्या । आजका जमानामा वरबधु त विज्ञापन हेरेर छानिन्छ । विज्ञापनविनाका किताब कसले छान्छ ?
तपाईँ भन्नुहुन्छ, लेखिरहनुपर्छ । अहिले नपढिए पनि पछि पढिन्छ । आज लेखनाथ, देवकोटाहरू पढिँदै छन् । भानुभक्त र उदयानन्द पढिँदै छन् । तर तपाईँको यस भनाइको पनि कुनै दम छैन, कुनै अर्थ छैन । एउटै किताव लेख्नेले ठूला ठूला पुरस्कार पड्काउँछन् । धेरै लेख्ने हेरेको हेर्‍यै हुन्छन् । तपाईंले नाम लिएका मान्छेले केचाहिँ पुरस्कार पाएका थिए ? जताबाट जसरी भए पनि आफ्नो प्रचारचाहिँ गर्नुपर्छ । पहुँचचाहिँ बनाउनुपर्छ । पहुँच बढाउने बाटो पार्टीको पनि हुन सक्छ । नारी समूहको पनि हुन सक्छ । साथी समूहको पनि हुन सक्छ । भजन मण्डलीको पनि हुन सक्छ । खानपानको पनि हुन सक्छ । राम्रो लेखेर, गुणस्तरको किताब बनाएर मात्र काम छैन । छ भने प्रचारको काम छ । भव्य विमोचनको काम छ । केही छ भने विमोचनको भोजको स्वादमा छ । विमोचनका दिन बाँडिएको खाममा छ । विमोचनको सम्मान र मायाको चिनोमा छ । विमोचनमा दिएको उपहारमा छ । जय विमोचन । जय विज्ञापन । जय प्रचारप्रसार ।
book, रमेश शुभेच्छु, विमोचन
Prevगुल्मीमा तीन जनाको शव फेला, घटना रहस्यमय
बनेपामा जापानी प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन हुनेNext
मिरा पिक हिमालको चुचुरोमा तीन पुस्तकको विमोचन
कविडाँडा साहित्य सम्मान तथा देव–खीना स्मृति पुरस्कार–२०७६ इन्द्र रेग्मीलाई
पुस्तक अंश : संयोग
व्यङ्ग्य : दाइजो
अब पाठ्यक्रममा स्थानीय कुरा पनि
दशैंलाई १० किताव (भिडियो अनुरोध)
बजेटप्रति शेखर गोल्छाको असन्तुष्टि,-'उद्योगीहरुको मनोबल घटायो'
विभिन्न जिल्लाका प्रजिअको सरुवा, कुन जिल्लामा को ?
काभ्रेका क्वारेन्टाइनहरुमा दैनिक सय जना थपिंदै
कर्णाली प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या १९८ पुग्यो
थप १३ जनामा कोरोना पुष्टि, कूल संख्या १८११ पुग्यो
संशोधन विधेयक राजपत्रमा प्रकाशितदेखि स्वदेश फर्काउने तयारीसम्म (भिडियोसहित)
'उच्च पहाडमा बस्ने मानिसलाई कोरोना संक्रमणको खतरा कम'– अनुसन्धान
कतारमा कोरोनाबाट स्वास्थ्य लाभ गर्नेको सङ्ख्या ३३ हजार नाघ्यो